Warkii Radio Xoriyo : 04 Jan, 2002
Ciidanka Wadaniga Xoreynta Ogaadeenya oo Guulo Ka Soo Hoyiyey Goobaha Dagaalka
Wariyaha Raadiyo Xoriyo uga soo warama Ciidanka Wadaniga Xoreynta Ogaadeenya ayaa soo sheegay Degaalo dhawr ah oo dhex maray Ciidanka Wadaniga Xoreynta Ogaadeenya iyo Kuwa Cabudhiska Gumeysiga Itoobiya, waxaana oogu danbeeyey kuwan
09 December 2001 Weerar kadis ah ooy Ciidanka Wadaniga Xoreynta Ogaadeenya ee sida Goonida ah u tababaran ku Qaadeen Xarunta Saraakiisha ee Saldhiga Ciidanka Cabudhisa Gumeysiga Itoobiya Magaaladda Dh/buur waxaa lagu Dilay 6 Askari iyadoo 6 kalena lagu dhaawacay sidoo kale Waxaa Goobtaas Ciidanka Gumeysiga Itoobiya lagu gaadhsiiyey Khasaare lexaad leh iyada oo wakhti ay Ciidankii Waajibkaas Gutay Mudo ka sii maqnaayeen ayaa wali Cabaad iyo Olel meeshaas ka sii baxey.Hadaba dib ayaan Khasaaraha Goobtaas ka dhacay inta uu la eg yahay ka soo sheegi doonaa.
12 December 2001 Dharkaynleey oo Galbeedka ka xigta Magaaladda Dh/buur Degaal ka dhacay Goobtaas oo dhex maray Ciidanka Wadaniga Xoreyntta iyo Gumeysiga Itoobiya waxaa lagaga dilay Cadawga 16 Askari iyadoo laga dhaawacay 10 kale oo dhaawacaas la il daran.
20 December 2001 Dundumo Codka oo ka tirsan Gobalka Nogbeed kuna taala Waqooyiga Magaaladda Fiiq Degaal ka dhacay Waxaa Ciidanka Cabudhiska Gumeysiga Itoobiya lagaga dilay 3 Askari iyadoo qaar kalen lagaga dhaawacay.
22 December 2001 Ciinley oo ku taala Waqooyiga Dh/buur Degaal Goobtaas ka dhacay waxaa Ciidanka Gumeysiga Itoobiya loogu geystay Khasaarihii ugu weynaa ee Beryahan soo gaadha iyadoo Degaalkaas lagaga gubay 2dii Baroon ee Tignikada ahaa oo Dhibaato xoog leh oo Xosuuq ah u geysan Jiray Shacbiga Soomaaliyeed eey Xabashidu Gumeysato.Baroomadaas oo intii mudo ahba uu Ciidanka Wadaniga Xoreynga Ogaadeenya la socday Dhaq dhaqaaqooda waxaa Dekem la siiyey Markii ay Soo Joogsadeen Goobtii loogu tala Galay in lagu gubo waxaa kale oo goobtaas loogu geystay Ciidanka Itoobiya Khasaarihii dhimasho ee oogu badnaa kaas oo wariyaha Raadiyo Xoriyo uu Dib inooga so gudbin doona.
5-22 December 2001 Gudhis oo ka tirsan Gobalka Nogob Degaalo goos Goos ah oo xiliyadaas kala dhacay waxaa Ciidanka Gumeysiga Itoobiya looga dilay isugeyn 13 Askari ,waxaana lagaga dhaawacay 09 Askari.
Ciidanka Wadaniga Xoreynta Ogaadeenya ayaad moodaa in uu Hadiyadii oogu Qaalisanayd u hadiyeeyey Ciidanka Cabudhiska Gumeysiga Itoobiya Maalmihii oogu danbeeyey ee Dabayaaqadda Sanadka 2001 si ay hor u dhac oogu noqoto Dhurbaaxadda lagu soo wado sanadka 2002da oo xawliga Halganka Shacbigu ku socon doono Haddii uu Eebe idmo mid aad u sareeya.
Kaligii Taliye Males Zinaawi oo ka buuxiyey Hayadda Nabadsugidda Itoobiya Reer Adwa oo ah Magaaladda uu ku dhashay.
Wariyaha Wareega ee Radio Xoriyo Qamaan Xirsi ayaa inoo soo diray Dhambaal kale oo xambaarsan Kaligii Taliye Males Zinaawi oo hadda la wada aragsan yahay Talaabooyinka uu rabo in uu ku khaldo Shacbiga uu Xooga ku xukumo iyo Kuwa uu Gumeystaba inagoo ku bilaabayna Dadkii oo ka kala yaacay ooy oogu horeeyaan Madaxii Wargeysta Wagahta oo Tigree ah.
MADAXA WARGEYSKA WOGAHTA OO MAREYKAN ISKA DHIIBTAY
Madaxa wargeyska Wogahta oo ah Wargeys ku soo baxa Af Tigrinia kana soo baxa magaalada Maqale ayaa Itoobiya si nabad ooga baxsatay ka dib marka uu Melez Zenaawi amar bixiyay in la xidho. Wogahta waa wargeys caan ka ah gobolka Tigree waana mid mucaarid ku ah Melez Zenaawi iyo dowladiisa.Haweyneeyda la yidhaahdo Berhan Hailu ayaa madax uu aheeyd wargeyskaasi isaga ah waxaana loo xaqiijiyay Radio Xoriyo in ay si nabad ah ku gaadhay dalkaasi mareykanka.
Wararka waxay intaasi ku darayaan waxay uu badan tahay in Berhan Hailu ay dibbeda ka si wado Wargeyskeeda ku soo baxo af-tigrinyada kuna ah mucaarid Melez Zenaawi. Wararka waxay intaas ku darayaan in xubno badan oo ka tirsan Jaaliyada Tigreega ee Mareykanka ay si gacmo furan ku soo dhoweeyeen Berhan Hailu. Jaaliyada Tigreega waxay balan qadeen in ay garab siin doonaan Berhan Hailu sida ay uu wado in ay xaqiiqada ka tarjumto oo caalamka la socodsiiso in uu Melez Zenaawi iska daa qowmiyadaha kale ee uu Tiisa oo ah Tigree xitaa dan uu wadin.
HAYADDA NABADSUGIDA ITOOBIYA OO REER ADWA BUUXIYAY (SARKAAL MUCAARID AH OO NOO WARAMAY)
Kaadiriinta ururka TPLF ka ma dacwoonin oo kaliya musuqmaasuqa uu wado Kaliye Taliye Melez Zenaawi iyo shirkadaha ay isla leeyihiin isaga iyo Sebhaat Negaiyo Seyoum Mesfin. Waxaa muuqato in xafiiska nabadsugida 10 sano ee la soo dhaafay lagu buuxinayay reer ADWA oo ah magaalada ay Zenaawi iyo Sebhaat Nega ka yimaadeen. Warar aan ka helnay nin tigree ah oo uu shaqeeyn jiray xafiiska lakiin hada ah kuwa la safan Siye Abraha ayaa sheegay in masuliyiinta soo socdo ee xafiiska nabadsugida ay wada yihiin reer Adwa
Mesfin Gebre Michael ( oo loo yaqaano Weteto) Mekonen Gebre Mariam (oo loo yaqaano Wedi Kobel)
Getachew Teferi Wolde Selassie Wolde Mariam Issayas Wolde Giorgis ( oo aabihii yahay ninka iska leh hotelka loo yaqaano ASSEN oo ku yaalo magaalada Adwa, walaashii oo la yidhaahdo Awtash uu Zenaawi uu dhiibay jago xafiiska dhismaha ay dowladda itoobiya) iyo Meres Alemayehu Dhamaan waa wada reer Adwa waxayna haystaan Jagooyin muhiim ah xafiiska nabadsugida.
Waxaa kale oo la ii sheegay (aniga oo ah Qamaan Xirsi) in ay jirto qeyb khaas ah xafiiska nabadsugida oo loo yaqaano Liyu Tibeka. Qeybtani waxaa madax uu ahaa Mekonen (Samuel) Gebre Mariam oo ahaa ninka waa dhoweed baxsaday oo masuul ka ahaa securityga Zenaawi. Liyu Tibeka xafiiskeeda wuxuu ku yaal gadaasha xafiiska OAUda. Wuxuuna uu dhow yahay BAMBIS GARAGE. Waxaa kale la ii sheegay in Liyo Tibeka ay maamusho xabisyo khaas ah oo ay ka mid yihiin xabiska Adet oo ku yaal Axum xabiska Agbe xabiska Tembien xabiska Kaliti oo ku ag yaal Addis Ababa iyo xabiska Zwai oo ah meesha lagu hayo oromada.
Radio Xoriyo, 04 Jan, 2002
Eegana ku soo dhawaada Googooskii Kooxda Ogaal ee Jabhadda Wadaniga Xoreynta Ogaadeenya oo inoo sii wada Googooskii ka Hadlayey Siyaasadda Gumeysiga Itoobiya ee ku aadan Soomaaliya iyo Kooxaha Soomaaliyeed ee Gacan saarka la leh Itoobiya iyo Sunta ay ka soo Qaadaan Godey oo ah meesha Siminaarka Burburinta Soomaaliyeed lagu soo siiyo.Isagoo Maqal ah kaas oo faaladdii Warka Idiinku Badalay.Mahadsanidin.